Adeegyada Bulshada (Jihaynta Dhaqameed) - CORENav
Jihaynta Dhaqameed ▼
Adeegyada bulshada waa adeegyada, caawimaada, alaabta, iyo khayraadka loogu talagalay gudaha bulshooyinkooda. Adeegyadaan waxay noqonkaraan kuwo bilaash ah ama aad raqiis u ah ayna bixiso dawladu, ururada bulshadu saldhig u tahay, ama urur diimeed.
Wakaaladaha adeeg bulshada ee dawlada waxay adeegyo siiyaan dadka bulshada kudhex nool. Waxay caawiyaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah, sida qoysaska dakhligoodu hooseeyo, dadka aan guryaha lahayn, iyo dadka naafada ah. Barnaamijyada dawlada waxay leeyihiin waqtiyo xadidan oo adag oo looqorsheeyay iyo tilmaamo looga qayb qaato.
Halkaan waxaad kahelaysaa qaar kamid barnaamijyada dawlada ee taageera qaxootiyada:
Barnamijyada Caawimaada Lacagta caddaanka ah
Dadka ay ku adkaato helista shaqo, labo barnaamij ayaa siiya caawimaad dhaqaale oo kumeel gaar ah: Caawimaada Kumeelgaarka ah ee Qoysaska baahan (TANF) ee waalidka haysta caruurta iyo Caawimaada lacagta caddaankaee Qaxootiga (RCA) ee xaqootiyada isqaba ama aan guursan ee aan lahayn caruurta.
Barnaamijka Caawimaada Cuntada (SNAP)
Barnaamijkaan wxuu caawiyaa dadka dakhligoodu hooseeyo ee kunool Maraykanka si ay ugataan cunto. Qofka barnaamijkaan kujira waxaa lasiinayaa kaar uu kugadan karo cadad kooban oo cuntooyin ah bilkastta. Qaxootiyadu waxay caawimaad cunto kacodsan karaan xafiiska dawlada hoose. Cadadka caawimaadu way kala duwan tahay gobalkasta waxayna kuxiran tahay tirada iyo dhaqaalaha qoyska.
Dakhliga Sugida Kaabbida ah (SSI)
Kani waa barnaamij caawimaada lacagta caddanka oo federalku bixiyo kaasoo lasiiyo dadka naafada ah ama kawayn da’da 65 hasyana qarashka aadka uyar ama aanba haysan.
Barnaamijyada Caawimaada Daryeelka Caruurta
Bulshooyinka qaar waxay bixiyaan daryeelka caruurta oo bilaash ama raqiis ah ayna siiyaan dadka dakhligoodu hooseeyo si ay ushaqaystaan ama shaqo uraadsadaan.
Deegaan walba wuxuu leeyahay adeegyo dadwayne oo lasiiyo qof walba. Halkaan waxaad kahelaysaa dhawr kamida adeegyada ugu badan ee labxiyo:
Adeegyada Degdeg ah iyo 911
Dhamaan bulshooyinku waxay leeyihiin waaxaha dabka iyo adeegyada caafimaadka ee degdega ah. Si caawimaad lagaaga siiyo xaalad degdeg ah, wac 911 una sheeg qofka kaaqabta waxaad ubaahantahay (“Boosliiska”. “Dabka”, ama “Aanbalaasta”) iyo meesha aad joogtid. Haddaad dhibaatadaada kusharxi karin afka Ingiriisiga, kaliya dheh “Help” ama “Emergency” hana daminin taleefanka. Taleefanka furan wuxuu kacaawinaya hawlwadeenka meesha aad joogto.
Saraakiisha booliisku waa adeegayaashaa bulshada kuwaasoo i;laaliya dadwaynaha dadkana caawiya. Haddii sarkaal booliis ah kuu yimaado kuuna sheego inaad istaagto, sidaas samee. Had iyo jeer adeec codsiga sarkaal isdajina oo xushmad lahoow. Haddaadan fahmayn booliiska, codso turjuman si samirlehna usug. Haddaad awoodo, laxariir wakaalada dib udajinta si laguu caawiyo.
Maktabadaha dadwaynaha waxaa yaala buug iyo alaab kale, sida CD yo, DVD yo, kuwaasoo ay si bilaash ah kusoo ay soo amaanaysan karaan dadka deegaanku. Waa inaad codsataa kaarka maktabada si aad buug uga qaadato maktabada. Maktabaduhu waxay badanaa sameeyaan barnaamijada akhrinta ee caruurta iyo casharo sida barashada kuhadalka Ingiriisiga, waxaana ooli kara kumbuyuutaro ay dadwaynuhu isticmaali karaan.
Beeraha iyo Raaxaysiga
Beeraha deegaanka waxay leeyihiin meelaha tamashlaha, garoonada lag ciyaaro, iyo meelaha isboortiga ee dad waynaha. Beero badan waxay leeyihiin shuruuc kusaabsan nooca dadka ee soogali kara ama aan soogali karin, inta badan beeraha deegaanka waa bilaash, laakiin beeraha gobalka ama federalku waxay kaaqaadi karaan lacag lagu galo.
Caawimaada Haayadaha aan Dawliga ahayn
Ururada qaar oo bixiya adeegga waxay kushaqeeyaan sadaqaad ay kahelaan muwaadiniin gaar ah ama iskudarka deeqaha iyo qarashaadka ay kahelaan dawlada. Waxay leeyihiin gudiyo iskuduwayaal ah kuwaasoo kormeera shaqadooda waana inay keenaan warbixnada sanadlaha ah ee shaqooyinkooda, laakiin gaar ayay ka yihiin dawlada.
Ururada noocaan ah waxay si guud hoos yimaadaan mid kamid sadexdaan qaybood ee soosocta:
Ururada Qaran ee Aan dawliga ahayn (NGOs)
NGO yada qaran waxay adeegyo kabixiyaan meelo kala duwan oo wadanka kamid ah, kuwaasoo caadi ahaanay diyaariyaan xafiisyada xarumahooda kuyaala magaalo wayn. Qaarkood waxay bixin karaan adeegyada caawinta qaxootiyada. Tirada, qiimaha, iyo nooca adeegyadaan way kaladuwan yihiin meelaha kaladuwan, laakiin kuwo badan waxay bixiyaan adeegyada soosocda:
Caawimaad heerka soogalooti
Casharo Luuqada Ingiriisiga ah
Adeegyada fasarida iyo turjumida
Ururada Bushada Ushaqeeya (CBOs)
Ururadaan waxay kashaqeeyaan bulshooyinka maxaliga ah waxay bixiyaan adeegyada nasashada, bulshada, iyo waxbarashada oo ay siiyaan xubnaha bulshada. Hal nooc oo kamida CBO oo aad kaheli karto deegaankaaga waa ururada arimaha isirka ee bulshada laxariira (ECBO). ECBO yada waxaa aasaasay qaxootiyaal iyo soogalotiyaal hore waxayna caawiyaan dadka cusub ee qowmiyadooda katirsan. Qaarkood waxay bixiyaan casharada dadka waawayn, waxay abaabulaan ururada haweenka, waxayna qabtaan qabtaan dhacdooyinka dhaqan iyo raaxaysiga ah.
Ururada Diimaha (FBOs)
FBO yada waxaa kamida kaniisadaha, masaajida, macbadyada yahuuda, iyo meelaha kale ee cibaadada kuwaasoo ujeedadoodu tahay in ay kudhaqmaan caqiidadooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira FBO yo badan, kuwaasoo lcago kahela ama kuxiran ururo diimeedyo kaladuwan, laakiin hiigsigoodu yahay inay caawiyaan dadka baahan iyo qoysaska faqiirka ah ayadoon lafiirinayn diintooda. Qaarkood waxay bixiyaan casharo luuqada Ingiriisiga ah oo lasiiyo dadka waawayn qaarkoodna waxay dadka uqaybiyaan maryaha huudheeyda ah iyo kuraasta ee dadka kale soo isticmaaleen.